Fri, Jun 5, 2020 at 10:53pm
चर्चित बलिउड अभिनेत्री ‘प्रियंका चोपडा’ का सफल हुने सुत्रहरु !
एजेन्सी । अधिकांश साधारण व्यक्तिलाई कलाकारको जीवनशैली कस्तो होला र आफू पनि उनीहरु जस्तै बन्न के गर्नु पर्ला भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । कलाकार जस्तै बन्ने रहर हुन्छ । यदि तपाईलाई पनि बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडा जस्तो बन्न मन छ भने के-के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले बताएकी छिन् । उनले आफ्नो सोचाइ र आफुले गर्दै आएको कुराहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । पेन्गुइन पब्लिकेशनले..
यस्तो छ भारतीय क्रिकेटर ‘बिराट कोहली’ को ‘फिटनेस मन्त्र’
नयाँदिल्ली । भारतीय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन बिराट कोहली आफ्नो देशमा मात्रै नभएर संसारभर नै चर्चित छन् । भर्खरैमात्र चर्चित बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मासँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका यी युवा खेलाडी स्वास्थ्य र फिटनेशको मामिलामा समेत अग्रस्थानमा गनिन्छन् । क्रिकेटको दुनियाँमा आफ्नो बेग्लै स्थान जमाउन सफल यी खेलाडी करोडौं युवाहरुको आइकन समेत हुन् । आफ्नै मौलिक र विशिष्ट ढाँचाको लोभलाग्दो ब्याटिङ स्टाइल, जुझारुपन र..
असामान्य जीवन बाँच्ने सामान्य मान्छे : ‘मंगलबजारका बाजे’
मंसिर २९, ललितपुर । पाटनका तान्त्रिक गल्लिहरुमा नियमित देखा पर्ने एउटा अनुहार हो । कृष्णचरण मिश्रको । पाटनका चिसा अनि अध्याँरा गल्लिमा उनको ६० बर्षे आयु बितिगयो । थाह छैन अझै कति बर्ष यी गल्लिहरुमा उनि आफुलाई डोहोर्‍याईरहनेछन् । रातो चन्दनको लामो टिकामा सजिएर हिड्ने मिश्रले पाटनका चिया पसल, मन्दिर, भजन मण्डलीका मार्गहरु चाहार्दा/चाहार्दै आफ्नो कपाल र दारी ​​फुलेका पत्तै पाएनन् । मंगलबजारका..
‘नो सेभ नोभेम्बर’ इज ओभर ! जान्नुस् यसका रहस्यहरु...
शनिबार, मंसिर १६, २०७४ साल
आज डिसेम्बर एक तारिख अर्थात धेरै युवाहरुको अनुहार नै फेरिने दिन । नो सेभ नोभेम्बर मनाएकाहरुको आज दाह्री काट्नका लागि लाइन नै देख्न सकिन्छ । एक महिना बुढो दाह्री फालेर आफू जवान देखिन तम्सिएका कतिपय युवा भने यसको महिमाबारे बेखबर पाइएका छन् । हुन त आजकल दाह्री–जुँगा नपाल्ने वा पाल्न मन नपराउने युवाको सँख्या घट्दो क्रममा छ । त्यसो त,..
भारतीय अभिनेता ‘ओम पुरी’ को सिनेमा प्रवेश : दुस्साहस
जनवरी २०१७ मा नगरका अखबार, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा खबर फैलियो । खबर थियो अभिनेता ओम पुरीको निधन । कुरुप भनिने ओम पुरीको अनुहार मथिगंलमा चलमलायो । मोटो तर हुदयका हरेक तार झंकृत गर्ने बुलन्द आवाज मनमा गुञ्जायमान भयो । सिनेमा प्रेमिहरुको मन कुँडियो । मस्तिष्कमा गहिरो खाडल बन्यो । तर यो मृत्यु ओम पुरी र उनको अभिनय जत्तिकै प्रिय थियो..
पहिलो गीतबाटै चम्किएका गायक जिवन ढुङ्गेल (संवाद/भिडियो)
काठमाडौं, मंसिर १३ । २३ वर्षअघि पाँचथरमा जन्मिएका जिवन ढुंगेलले आफ्नो गायन यात्रा सुरु गरेको धेरै भएको छैन । विज्ञानमा स्नातक गरेका यी तन्नेरी गायक हाल भारतको इलाहबादबाट शाश्त्रीय संगीतमा स्नातक समेत गरिरहेका छन् । आफ्नो पहिलो गीतकोरुपमा ‘तिमी फूल’ बोलको गीत गाएर चर्चाको शिखरमा चढ्दै गरेका जिवन चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाललाई आफ्नो अनौपचारिक गुरुकारुपमा स्वीकार गर्दछन् । आफ्नै शब्द तथा संगीत..
निशालाई खस्किएको करियर उकास्ने चुनौति
मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४ साल
काठमाडौं कार्तिक २१। नेपाली सिने जगतको एक चर्चित नाम हो निशा अधिकारी । सिने जगतको चर्चित तथा सुन्दरी नायिका निशा अधिकारी यति बेला दुइ फिल्मको प्रमोशनका लागि व्यस्त छिन् । चलचित्र मिसन पैसाबाट नेपाली सिने जगतमा प्रवेश गरेकी नायिका निशा चलचित्र रोमियो र झ्यानाकुटीको प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन् । अहिले उनलाई भ्याई नभ्याई छ । उनको यी दुइ फिल्म एक साताको अन्तरालमा देशभर प्रदर्शनमा..
नेपाली सेनामा २७ सय जनाको जागिर खुल्यो, सिकर्मी र ड्राइभर समेत
आईतवार, असोज २२, २०७४ साल
२२ असोज, काठमाडौं । नेपाली सेनाले २७ सय पदमा भर्ना आवेदन खोलेको छ । सेनाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले विभिन्न पदहरुमा खुला दरखास्त आह्वान गरेको हो । सेनाले सहायक पण्डित हुद्दा, अमलदार, सैन्य जवान, ड्राइभर, फलोवर्स लेखा जमल्दार लगायतको २ हजार ७ सय १ पदमा दरखास्त मागेको हो । सेनाले जंगी अड्डा अन्तरगत मात्र विभिन्न ५ सय..
आमाकी प्यारी छोरी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी
काठमाडौं । आफ्नो सौन्दर्यका एवम् अभिनय क्षमताले नेपाली युवा पुस्ताको ढुकढुकी बन्न सफल साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई उनको पहिलो फिल्मले नै नसोचेको सफलता दिलायो । २ वर्षअघि रिलिज भएको चलचित्र ‘ड्रिम्स’बाट अनमोल केसीसँग देखापरेकी यी सुन्दर नायिका अहिले उनी ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ नामक फिल्मको छायांकनमा व्यस्त छिन् । साम्रज्ञी अभिनित दोस्रो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ प्रदर्शनमा आइसकेको छ । आफ्नो सौन्दर्य र अभिनय..
टाइगर श्राफ फिट हुनुको रहस्य
बिहिवार, भाद्र २९, २०७४ साल
पुराना बलिउड चर्चित अभिनेता जैकी श्राफले आफ्ना छोरा टाइगर श्राफलई समेत बलिउडमै स्थापित गराएको कुरा त सबैलाई थाह भएकै कुरा हो । तर, जैकी पुत्र टाइगरप्रति उनका फ्यानहरु मरिहत्तै किन गर्छन् भन्ने कुराको जवाफ भने कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ । हजुर, त्यसको जवाफ हो टाइगरको फिटनेश मन्त्र । फिटनेशका मामलामा त टाइगरले बलिउडका सबै हिरोलाई पछि छोडिदिएका छन् भन्दा..
रत्ननगर (चितवन): ठूल्ठूला जेब्रा, अर्नालगायत वन्यजन्तु गोहीले सजिलै मारेका घटना हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट देख्छौँ । गोहीले समाइसकेपछि फुत्किने मौका कमै हुन्छ । तर चितवनमा गोहीको मुखमा पुगेका मामुली बालक फुत्किए् भन्दा तपार्इंलाई आश्चर्य लाग्ला । यो यथार्थ हो । गोहीले समाएका बालक सकुशल फिर्ता भए । अहिले उनी उपचाररत छन् । गत चैत २५ गते भरतपुर महानगर–२३ जगतपुर घैलाघारीका १२ वर्षीय बालक..
सिरहा । सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ? त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ । त्यो फूल हेर्न कौतुहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतबाट आउनेको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ । इसाको छैटाँै सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका दिन बिहानीपख फुल्नु र..
एजेन्सी: कम्बोडियाको एक प्रयोगशाला कम्पनीलाई त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले मानव अंगको दुध अमेरिकामा निर्यातका गर्नबाट रोक लागाएको छ । त्यहाँको मन्त्रलायले एम्ब्रोसिया ल्याबलाई मानव अंगको दुध निर्यात गर्नबाट रोकेको हो । उक्त ल्याबले मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको र उक्त कार्य नैतिक मूल्यभन्दा फरक भएकोले उक्त कार्य रोक्न लगाएको हो र हाल यस ल्याबलाई त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निलम्बन समेत गरेको छ । उक्त..
एजेन्सी: नेपालमा झैँ अमेरिकामा पनि महिलाहरुमाथि हुने हिंशाको बिरुद्धमा विभिन्न आवाजहरु उठिरहेका छन् तर त्यस्तै आवाज उठिरहेकै बेला, अमेरिकाको टेक्सासका महिला सांसदहरुले पुरुषले हस्तमैथुन गरे १०० डलर जरिवाना गर्न विधेक दर्ता गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव सर्वप्रथम ल्याउनेमा महिला संसाद जेसिका फर्रार हुन् । उनी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी संसाद भएकीले यो प्रस्ताव हाउस अफ रिपि्रजेन्टेटिभबाट पास हुन भने गार्हो छ ।..
वेलिङ्टन (न्युजिल्यान्ड): पृथ्वीमा छ करोड दशलाख वर्ष अघिदेखि नै पेन्गुइन पक्षीको अस्तित्व भेटिएको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । परापूर्वकालदेखि पृथ्वीमा बिचरण गर्दै आएका सबभन्दा भीमकाय जनावर भनी विश्वास र दावी गरिँदै आएको डाइनासोरको उत्पत्ति सुरु भएको युगभन्दा पनि धेरै धेरै पहिलादेखि नै पेन्गुइन पक्षीको अस्तित्व सुरु भएको रहेछ भन्ने तथ्य न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चमा मुख्यालय रहेको क्यान्टरब्युरि जीव सङ्ग्रहालयले दाबी गरेको छ..
पाल्पा: सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर यो सत्य घटना हो । कुखुराको पनि परिवार नियोजन हुन्छ भन्दा अब नौलो मान्नु पर्दैन । कुखुराको भालेमा बन्ध्याकरण सफल बन्दै गएपछि अब अच्चम मान्नु पर्दैन । पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिका–१४ बर्दलेका जनार्दन पन्तले कुखुराको भालेको अण्डकोष निकालेर परिवार नियोजन गर्न थालेका छन् । कुखुराको भालेको बन्ध्याकरण गर्ने अभ्यास पाल्पामा नौलो हो । भालेको पछाडिको..
मुम्बई (भारत): इजिप्टकी ‘विश्वकै सबैभन्दा बढी वजन भएकी महिला’ शल्यक्रियामार्फत आफ्नो वजन घटाउन भारतीय सहर मुम्बई आउने भएकी छन् । उनको तौल हाल पाँचसय किलोग्राम रहेको छ । छत्तिस बर्षीय एमान अहमद अब्देल अतीलाई इजिप्टको विदेशमन्त्रीको पहलमा भिषा प्रदान गरिएपछि आज शनिबार उनी मुम्बई आइपुग्ने बताइएको छ । अब्देल अतीलाई ल्याउनु एक विमानलाई विशेष सुधारगरी शनिबार इजिप्टबाट मुम्बईका लागि पठाइने छ भने..
लन्डनः डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा जनसङ्ख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको र यस असमानताले विश्व समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने चुनौती देखिएको जानकारी दिएको छ । विश्वका सबैभन्दा गरिब तीन अर्ब ६० करोड जनताको सम्पत्ति अमेरिकाका छ, स्पेनका एक तथा मेक्सिकोको एक व्यापारिको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ । फोर्बसले..
सिएनएन : सुन्दानै अचम्म लाग्ने, तपाईंले कहिले कतै सुन्नु भएको छ ? स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो स्मार्टफोन चलाउनको लागि 'टोइलेट पेपर' को प्रयोग गर्नुहोस् भनेर? तपाईं यदी अहिले जापानमा हुनुहुन्छ भने वा जापानको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने नारिटा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा अवस्थित ८६ आगमन स्टलहरुको शौचालयभित्र तपाईंले टोइलेट पेपरमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको लागि भनेर उल्लेख गरिएको सन्देश देख्नुहुनेछ । उक्त टोइलेट पेपरमा तपाईंलाई जापानमा..
सिएनएन: तपाईंलाई आफ्नो घरमा चोर घुसेर सबै सामान लगेको आफ्नै आँखाले देख्दा त्यो भन्दा ठुलो पीडा के होला? तर अमेरिकाको मिसौरी राज्यको मध्यपस्चिम क्षेत्रमा रहेको कन्सास शहरमा नयाँँ बर्ष-२०१७ को पूर्व सन्ध्यामा एउटा यस्तै घटना भएको छ । कन्सास शहरमा अग्नी नियन्त्रकको काम गर्ने श्रीमान रायन कोयहलर र केस्लीले उनीहरुको घरमा चोरी भएको घटना आफ्नै मोबाइल फोनमा प्रत्यक्ष हेरे । उनीहरुलाई..
बिहिवार, मंसिर ३०, २०७३ साल
एजेन्सी। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगातार चौंथो पटक विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहन सफल भएका छन्। अमेरिकाको विश्व प्रसिद्ध आर्थिक पत्रिका फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका १०० शक्तिशाली व्यक्ति मध्य पुटिन पहिलो सूचीमा परेका हुन्। पुटिनले अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उछिन्दै शीर्ष स्थानमा उक्क्लिएका हुन् तर केही दिन अगाडिमात्रै टाइम्स म्यागजिनले ट्रम्पलाई वर्ष व्यक्ति घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी,..
बुधबार, मंसिर २९, २०७३ साल
वासिङ्गटनः पृथ्वीको सबभन्दा निकट रहेको र “रक्त ग्रह (रेड प्लानेट)” को नामबाट पनि परिचित मङ्गल ग्रहमा एक बिशाल र अनौठो बनावट देखिएको छ । इन्टरनेट सञ्जालको “मुन्डो डेस्कोनोसिडो” नाम शीर्षकको यु ट्युब प्रसारणमा हालै मात्र पोस्ट गरिएको मङ्गल ग्रहको पछिल्लो तस्बीरमा तीन वटा निकै अग्ला धरहरा (टावर) देखिएका छन् । झट्ट हेर्दा ती तीनवटै टावर बिशाल भौतिक संरचनाभन्दा कम छैनन् र एउटा..
मेलवर्नः सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने हालै अष्टे«लियामा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानिसको तनाव, चिन्ता र खुसीबीचको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । युनिभर्सिटी अफ मेलवर्न र मोनास युनिभर्सिटीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालले एक अर्कालाई सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग गरेकाले मानसिक तनाव कम गराएको हुन सक्ने निश्कर्ष..
एजेन्सी। अमेरिकी नागरिक किम पीक जसले आफ्नो आँखाको माध्यमबाट एकै पटकमा किताबका दुई पृष्ठ एकै पटकमा पढ्न सक्ने क्षमता राख्ने गर्दा उनी विश्वभर प्रख्यात थिए। उनमा कुनै पनि पुस्तक पढेपछि दुवै पृष्ठको बिषयबस्तु ९८ प्रतिशत सम्झन सक्ने क्षमता थियो। उनको यस्तो क्षमता उनी आधा-वर्षको हुँदादेखि नै बिकाश भएको थियो । १९५१ मा अमेरिकामा जन्मिएका उनको यस्तो क्षमता हुनुमा उनको बुबासंगै उनी..
बुटवल । सर्पको डसाइबाट मृत्यु भएका भनिएका यहाँका एक व्यक्तिको दाहसंस्कार गर्न लाग्दा जिवित मानिसले जस्तै शरीरका अङ्ग चलाउन थालेपछि सबैलाई चकित पारेका छन् । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–९ देउपारका जोखु चौधरीलाई शुक्रबार बेलुका घरमै सर्पले डसेको थियो । सर्पको डसाइपछि उनलाई तत्कालै उपचारार्थ लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा ल्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । अस्पतालमा मृत्यु भएका जोखुलाई परिवारले रातिनै घर लगेर..
बेइजिङ (चीन) । चिनियाँ विमान चालक एक जना सहयोगीका साथमा विमानद्वारा गरिने चीनको पहिलो विश्व यात्राका लागि राजधानी बेइजिङबाट आइतबार छुटेका हुन्। एक इन्जिन भएको टर्बोप्रप टीएमबी ७०० विमानलाई लिएर ५० वर्षीय विमान चालक झाङ बो ५८ दिन लामो यात्राका लागि निस्किएका हुन् । उनले रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, आइसल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) गरी विभिन्न २० देशका ५० स्थलमा अवतरण..
मेल्बोर्न, अस्ट्रेलिया। सदा विजयी रहने आशय वा बेलायती पूर्वसाम्राज्ञी भिक्टोरियाका देशबासी भन्ने तात्पर्यसहितको नामाकरण गरिएको भिक्टोरियन भनी परिचित अस्ट्रेलियाली जनताले बिद्युतीय यन्त्र परिचालित स्लट मेसिनमा जुवा खेली अबौँ डलर गुमाउँछन् भन्ने कसले सोचेको हुन्छ र ? तर यथार्थ हालै बाहिर आएका छन् । गत २४ वर्षअघि मुलुकमा भित्रिइ जुवाडेहरुका माझ लोकप्रिय हुँदै आएको यस स्लट मेसिनमा जुवा खेल्दाखेल्दै अस्ट्रेलियालीले ३८ अर्ब..
काठमाडौं। तपाई सडकमा ठूलो दुर्घटनाबाट यदि बाच्नु भयो भने आफूलाई कस्तो पाउनु हुन्छ होला ? दुर्घटना पछिको जीवन तपाई कस्तो कल्पनु गर्नुहुन्छ ? उत्तर सजिलो छ । ठूलो दुर्घटनापछि यदी बाँचियो भने हामी कि अपाङ्गता कि त प्यारालैसिस भएर बाच्नुपर्ने हुन्छ। अष्ट्रेलियामा अहिले यस्तै ठूला सडक दूर्घटनाबाट बाँच्न सफल भएका मानिसको जीवन कस्तो हुन्छ होला ? यसैको परिकल्पना गर्दै मानब जस्तै..
नयाँ दिल्ली । बङ्गालको खाडीमा मौसमको अवस्था बुझ्ने प्रयोजनका लागि पानी भित्रै रोबोट परिचालन गरेर बुझिने भएको छ । भारत र बेलायतका मौसमविद्हरुले सो रोबोट पानीमा परिचालन गर्ने भएका हुन् । भारतीय समुद्रको पानीभित्रबाट बङ्गालको खाडीको मौसम मापन गरिने भएको बताइएको छ । मौसमको भविश्यबाणी प्रक्रिया थप विश्वसनीय बनाउन र यकिन रुपमा मौसमको मापन गर्न सजिलो होस भनेर यो प्रविधिको प्रयोग लाग्न..
काठमाडौं । विश्वका धनीहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने चर्चित पत्रिका फोब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका शक्तिशाली महिलाहरुको सूचीमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि परेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी विश्वको ५२ औँ शक्तिशाली महिलाको रुपमा उक्त पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको हो । फोर्ब्सको शक्तिशाली महिलाहरुको सूचमा नेपाली परेको यो पहिलो हो । नेपालमा राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभए पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट सम्बन्धका कारण..
Results 746: You are at page 24 of 25